ဗေဒင်ဆိုင်ရာ စာစုများ . . .: ကသစ်
ကိုပခန်းနဲ့ ဆရာနျုမာန်တို့ ကူညီပြုလုပ်ပေးတဲ့ ဆိုက်မှာ ဖော်ပြပြီးသား post ဖြစ်ပါတယ် . . postတွေအားလုံးစုစည်းမိအောင်လို့ ဒီဘလော့ဂ်မှာ ပြန်တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် . . မဖတ်ရသေးသူတွေလည်း ဖတ်လို့ရအောင်ပါ . . .
စ, သာ, ရွှေ, ကူ, အင်း, ၀, သူ, ဆန်, ဖြူ, တစ်, တင်း ပေး'' ဟူသော လင်္ကာကို ဗေဒင်ဝါသနာပါသူများအားလုံးလို လို သိရှိကြ ရွတ်ဆိုကြစမြဲပင်။ 'ကသစ်' လင်္ကာဟု အများသိ ကြသည်။ ကသစ်ဂြိုဟ်၊ အိမ်ရှင်ဂြိုဟ်၊ ဘာဝသခင်ဂြိုဟ်၊ ၀ဂ္ဂ သခင်ဂြိုဟ်များကို သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မဟာသုဇာတကကျမ်းတွင် ''ခေတ်ဟူသော ရာသီတို့ တွင် မိဿကစ၍ 'စ သာ ရွှေ ကူ အင်း ၀ သူ ဆန် ဖြူ တစ် တင်း ပေး''ကို လက်ဝဲရစ်အစဉ်အတိုင်းချလေး''က သစ် ဂြိုဟ်ဖြစ်၏။ ကသစ်ဂြိုဟ်ဟူသည်ကား မိဿစသော ရာသီ တို့ကို အင်္ဂါအစရှိသော ဂြိုဟ်တို့ အစိုးရကုန်၏။ ရာသီ၏ သခင်ဂြိုဟ်ဆိုလိုသည်။ န၀င်း၌ကား မိဿကစ၍ ကိုးရာသီ တိုင်အောင်သောရာသီတို့၏ သခင်ဂြိုဟ်တို့သည် မိဿရာသီ ၏ န၀င်းကိုးစုတို့ကို အစဉ်အတိုင်း အစိုးရကုန်၏''ဟု ဖော်ပြ ခဲ့သည်။ မြန်မာဘာသာပြန် ''ဗြို့ဟဇ်ဇာတကကျမ်း' တွင် ရာသီ ဇာတာနှင့် န၀င်းဇာတာတို့တွင် ကသစ်ခေါ်ရသီ သခင်ဂြိုဟ် များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။ ၁။ မိဿရာသီ အင်္ဂါဂြိုဟ် (စ) ၂။ ပြိဿ သောကြာ (သာ) ၃။ မေထုန် ဗုဒ္ဓဟူး (ရွှေ) ၄။ ကရကဋ် တနင်္လာ (ကူ) ၅။ သိဟ် တနင်္ဂနွေ (အင်း) ၆။ ကန် ဗုဒ္ဓဟူး (၀) ၇။ တူ သောကြာ (သူ) ၈။ ဗြိစ္ဆာ အင်္ဂါ (ဆန်) ၉။ ဓနု ကြာသပတေး (ဖြူ) ၁၀။ မကာရ စနေ (တစ်) ၁၁။ ကုံ စနေ (တင်း) ၁၂။ မိန် ကြာသပတေး (ပေး) )
မိဿ၊ ကရကဋ်၊ တူ၊ မကာရ ရာသီတို့သည် န၀င်း အစီအစဉ်တို့ ဖြစ်ကြ၏'' ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်ကို အောက်ပါအတိုင်း အိမ်ရှင်များကို ရာသီစက်တွင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ပရာသရဟောရာသျှတ္တရ ဗေဒင်ကျမ်းတွင် တနင်္ဂနွေ ဂြိုဟ်နှင့် တနင်္လာဂြိုဟ်တို့သည် ဘုရင်နှင့် မိဖုရားအသီးသီး ဖြစ်၍ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် စစ်သေနာပတိဖြစ်၏။ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် သည် အိမ်ရှေ့မင်းသားဖြစ်၏။ ကြာသပတေးနှင့် သောကြာဂြိုဟ်တို့သည် ၀န်ကြီးများ ဖြစ်ကြ၏။ စနေဂြိုဟ်သည် အမှုထမ်းဖြစ်၏ ဟုဖော်ပြထား သည်။ ရှေးအခါက ဘုရင်မင်းမြတ်တို့၏ ညီလာခံတွင် လက် ယာမင်းခမ်းတော်၊ လက်ဝဲမင်းခမ်းတော်အရ နေရာယူကြရ သည်။
..စသည်တို့ကို ရာသီစက်တွင် ထည့်သွင်းသော် အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရမည်။
ဖလိဇ္ပစိန္တာမဏိကျမ်းတွင်လည်း အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
နေစကြ၀ဠာတွင် နေကိုဗဟိုပြု၍ ၄ဟူးဂြိုဟ်၊ ၆ကြာဂြိုဟ်၊ ကမ္ဘာ (လ=၂င်္လာ)၊ ၃င်္ဂါဂြိုဟ်၊ ၅တေးဂြိုဟ်၊ စနေ ဂြိုဟ်၊ ယူရေးနပ်(စ်)ဂြိုဟ်၊ နက်ပ်ကျွန်းဂြိုဟ်၊ ပလူတိုဂြိုဟ် စသည်ဖြင့် အစဉ်လိုက်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ၁နွေ၊ ၄ဟူး၊ ၆ကြာ၊ ၂ ၃င်္ဂါ၊ ၅တေး၊ စနေ စသည်တို့ကို နေရာချထားပါက ရာသီစက်တွင် အောက်ပါ အတိုင်း တွေ့ရပေမည်။
ထိုနည်းတူ ကမ္ဘာဗဟိုပြု စကြ၀ဠာတွင် ကမ္ဘာ (၂င်္လာ)၊ ၄ဟူး၊ ၆ကြာ၊ ၁ ၃င်္ဂါ၊ ၅တေး၊ စနေ စသည် ဖော်ပြကြရာ အောက်ပါအတိုင်း လက်ယာရစ်ထည့်သွင်းပါက အောက်ပါအတိုင်း တွေ့ရပေမည်။
ထို့ကြောင့် နေဗဟိုပြု စကြ၀ဠာစနစ်နှင့် ကမ္ဘာ ဗဟိုပြု စကြ၀ဠာစနစ် နှစ်ခုကို ပေါင်းစပ်ကြည့်ပါက ကသစ် ဂြိုဟ်၏တည်နေရာအတိုင်း ပုံပေါ်လာမည် ဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ဆိုရမူ လိမ္မော်သီးနှစ်ခြမ်းသည် တစ်ခြမ်းနှင့်တစ်ခြမ်း အတူတူပင်ဖြစ်လေသည်ကို တွေ့ရပေ မည်။ နေ = ၁နွေနှင့် လ = ၂င်္လာတို့သည် (၁)ရာသီစီသာ ပိုင်ကြသည်။
ဘုရင်၊ မိဖုရား တစ်ပါးစီသာ ရှိကြသကဲ့သို့ဟု ရှေးက ဆိုကြသည်။ တစ်ရာသီစီသာ ပိုင်ကြသဖြင့် ဧက, ရာသီ, အဓိ ပတိ (ဧကရာဓိပတိ) ဂြိုဟ်ဟု ခေါ်ကြသည်။ ဧကရာဓိပတိ ဂြိုဟ်တို့သည် ထူးမြတ်သော ဂုဏ်ရှိကြသည်။ ၃င်္ဂါ၊ ၄ဟူး၊ ၅တေး၊ ၆ကြာ၊ စနေဂြိုဟ် (ငါး)လုံးကို စုပေါင်း၍ ပဉ္စတားဂြိုဟ်များဟု ခေါ်ကြသည်။ (ပညာရှင် စသည်တို့သည် တစ်ဦးထက် ပိုကြသည်)။ ပဉ္စတားဂြိုဟ်များ သည် (၂)ရာသီပိုင်ကြသည်ကို တွေ့ကြရမည်။ (၂)ရာသီ ပိုင် ကြ၍ ဒွိရာသီဓိပတိဂြိုဟ်များဟု ခေါ်ဆိုကြသည်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်၊ တနင်္လာဂြိုဟ် (၁)ရာသီပိုင် (ဧကရာဓိပတိ)၊ ရှေ့သို့ ပုံမှန်သွားသည်။ အင်္ဂါဂြိုဟ်၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်၊ ကြာသပတေးဂြိုဟ်၊ သောကြာဂြိုဟ်၊ စနေဂြိုဟ်..၎င်းဂြိုဟ် (ငါး)လုံးမှာ ပဉ္စတားဂြိုဟ်၊ (၂)ရာသီ ပိုင် (ဒွိရာသီ ဓိပတိ)၊ ရှေ့သို့ (သမ) သွားခြင်း၊ ရပ် (နိယထုံ) ကျင့်ခြင်း၊ နောက်ဆုတ် (၀ကြ)သွားခြင်း။
ရာဟုဂြိုဟ်၊ ကိတ်ဂြိုဟ် ဆာယာ (အရိပ်)ဂြိုဟ်၊ အိမ်ပိုင်မရှိ၊ အမြဲနောက်ဆုတ်သွား သည်။ မိဿရာသီပိုင် အင်္ဂါဂြိုဟ်၏မျက်နှာချင်းဆိုင် သမ သတ်တွင် တူရာသီပိုင် ၆ကြာဂြိုဟ် ရှိသည်။ ထိုနည်းတူ ပြိဿ ၆ကြာဂြိုဟ်၏ သမသတ် ဗြိစ္ဆာ ၃င်္ဂါရှိသည်။ ၄ဟူးနှင့် ၅တေးသည်လည်း သမသတ်တွင် ရှိကြ သည်။ ၁နွေ၏ သမသတ်တွင် စနေရှိသလို၊ ၂င်္လာ၏ သမ သတ်တွင် စနေရှိသည်။
နေနှင့်လသည် သဘောတူညီကြသည်။ သမသတ် တည်နေပုံမှာ အစဉ်တကျရှိလှသည်။ သမသတ်တည်နေပုံ အစဉ်တကျရှိနေပုံသာမက သုံးပွင့်ဆိုင်တြိဂံ (တြိကောဏ)တည်နေပုံမှာလည်းအစဉ်တကျ ရှိနေပြန်သည်။ ၁နွေ၊ ၅တေး၊ ၃င်္ဂါတို့သည် တြိကောဏ အနေအထားရှိသလို ၂င်္လာ၊ ၅တေး၊ ၃င်္ဂါတို့သည်လည်း တြိ ကောဏ အနေအထားရှိကြသဖြင့် ၁နွေ၊ ၂င်္လာ၊ ၅တေး၊ ၃င်္ဂါဟု တစ်အုပ်စု ဖွဲ့နိုင်သည်။ ထိုနည်းတူ ၆ကြာ၊ စနေ၊ ၄ဟူး တို့သည်လည်း တြိကောဏအနေအထား ရှိနေပြန်သည်။ ၆ကြာ၊ စနေ၊ ၄ဟူး တို့သည် တစ်အုပ်စု ဖွဲ့နိုင်ပြန်သည်။ စသည်ဖြင့် ကသစ်ဂြိုဟ် တို့၏တည်နေရာမှာ စနစ်တကျရှိလှပေသည်။
အချို့ကျမ်းများတွင် မေထုန်ရာသီကို ရာဟုဂြိုဟ် ပိုင်ဟု ဖော်ပြကြသည်။ ရွှေဆိုသည့်လင်္ကာတွင် ''ရကောက်''ကို နာမ်သင့်အက္ခရာအရ ရာဟု (၈) ပိုင်သည်ဟု ယူလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းတွင်ပင် န၀င်းသခင်များဟု ဖော်ပြရာ၌ ၃၊ ၆၊ ၄၊ ၂၊ ၁၊ ၄၊ ၆၊ ၃၊ ၅၊ ၀၊ ၀၊ ၅ ဟု ဖော်ပြထားသည် ကို တွေ့ရပြန်သည်။ ရာသီသခင်သည်ပင် ၀ဂ္ဂတွင် ဂြိုဟ်ဖြစ် သည်ဆိုပါကရာဟုကိုလည်း န၀င်းသခင်အဖြစ်ဖော်ပြသင့်၏။ အချို့က သင်္ချာနည်းအရ တွက်ကြပြန်သည်။ ၃+၆=၉၊ ၄+၅=၉၊ ၂+၇ (စနေ) = ၉ တို့ကြောင့် ၁+၈ (ကုံရာသီ) = ၉ ဟု တွက်ပြကြ၍ ရာဟုခေါ် ကသစ် အိမ်သည် ကုံရာသီဟု ပြကြပြီး၊ လင်္ကာကိုပြင်၍ ရွတ်ဆိုကြ ပြန်သည်။ ''စ သာ ရွှေ ကူ အင်း ၀ သူ၊ ဆန် ဖြူ တစ် ရင်း ပေး'' ဟူ၍ ရင်း = ရာဟု = ကုံရာသီဟု ဆိုကြပြန်သည်။ မေထုန်ကို ရာဟုအိမ်ဟု ပေးပါက ၄ဟူးသည် ဧကရာဓိပတိဂြိုဟ်၊ ရာဟုသည်လည်း ဧကရာဓိပတိဂြိုဟ်များ ဟု သတ်မှတ်ရပေမည်။ ထိုနည်းတူ ကုံရာသီကို ရာဟုအိမ်ဟု ပေးပါက စနေသည် ဧကရာဓိပတိဂြိုဟ်၊ ရာဟုသည်လည်း ဧကရာဓိပတိဟု မှတ်ရပေမည်။ ထို့ကြောင့် ကသစ်ဂြိုဟ်၊ အိမ်ရှင်ဂြိုဟ်၊ ဘာဝ သခင်ဂြိုဟ်၊ ၀ဂ္ဂအရှင်ဂြိုဟ်ကို ''စ သာ ရွှေ ကူ အင်း ၀ သူ ဆန် ဖြူ တစ် တင်း ပေး'' ဟူသည့်အတိုင်း အင်္ဂါ၊ သောကြာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ တနင်္လာ၊ တနင်္ဂနွေ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊ သောကြာ၊ အင်္ဂါ၊ ကြာသ ပတေး၊ စနေ၊ စနေ၊ ကြာသပတေးဟု မဟာသုဇာတက ဗြို့ဟဇ် ဇာတကကျမ်းများအရသာ ယူသင့်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ပါသည်။
Posted by aha at 1:34 AM
မြန်မာ ပြက္ခဒိန် အကြောင်း တစေ့တစ်စောင်း
III. The Empress (ဧကရီ)